News - Waraaqaha guryaha ee Shiinaha iyo badeecadaha fayadhowrka ee soo dejinta iyo dhoofinta xaaladda 2020
Sanadihii la soo dhaafay, mugga soo dejinta ee suuqa waraaqaha Shiinaha ayaa asal ahaan sii waday inuu hoos u dhaco. Marka la gaaro 2020, sanadlaha soo degida ee waraaqda guriga waxay noqon doontaa oo kaliya 27,700 tan, hoos udhaca 12.67% laga bilaabo sanadka 2019. Kobaca sii socda, noocyada wax soo saarka ee aad iyo aad u badan, ayaa awood u yeeshay inay si buuxda u daboolaan baahiyaha macaamiisha, waraaqaha guryaha la keenayo ayaa sii socon doona joog hoosee.
Ka mid ah waraaqaha guryaha ee la soo dhoofiyo, waraaqda ceyriinka ah wali wey ku badan tahay, taas oo ka dhigan 74.44%. Si kastaba ha noqotee, wadarta guud ee soo dejinta ayaa yar, saameynta ay ku yeelatay suuqa gudahana waa yar yahay.
Cudurka oof-wareenka cusub ee lama filaanka ah ee cusub ee 2020 wuxuu saameyn muhiim ah ku yeeshay dhammaan qeybaha kala duwan ee nolosha adduunka. Kordhinta fayodhowrka macaamilka iyo ka warqabka amniga ayaa kicisay kororka isticmaalka cunnada maalinlaha ah ee nadaafadda, oo ay ku jiraan waraaqaha guryaha, taas oo sidoo kale ka muuqata waraaqaha guryaha la keeno iyo ka ganacsiga dhoofinta. Tirakoobyadu waxay muujinayaan in waraaqaha guryaha ee Shiinaha loo dhoofiyo sannadka 2020 ay noqon doonaan 865,700 tan, kororka 11.12% sannad-sannadeedka; si kastaba ha noqotee, qiimaha dhoofinta ayaa noqon doonta USD 2,25567 milyan, hoos u dhac 13.30% ah sanadkii ka horeeyay. Guud ahaan dhoofinta alaabada waraaqaha guryaha ayaa muujisay isbeddel ku yimid mugga iyo qiimaha hoos u dhaca, iyo celceliska qiimaha dhoofinta ayaa hoos u dhacay 21.97% marka loo eego 2019.
Ka mid ah waraaqaha guryaha ee la dhoofiyay, mugga dhoofinta ee waraaqda aasaasiga ah iyo waraaqaha waraaqaha musqusha ayaa si weyn kor ugu kacay. Muga dhoofinta ee waraaqda aasaasiga ah ayaa kordhay 19.55 boqolkiiba laga soo bilaabo 2019 illaa qiyaastii 232,680 tan, iyo xaddiga dhoofinta waraaqda musqusha ayaa kordhay 22.41% illaa kudhowaad 333,470 tan. Waraaqda ceyriinka ah waxay u dhigantaa 26.88% dhoofinta waraaqaha guryaha, koror ah 1.9 boqolkiiba dhibcaha 24.98% ee 2019. Dhoofinta waraaqda musqusha waxay u dhigantaa 38.52%, koror dhan 3.55 boqolkiiba dhibcaha 34.97% ee 2019. Sababta suuragalka ah waxay tahay Saameynta cudurka faafa, argagaxa iibsashada waraaqda musqusha ee wadamada shisheeye mudada gaaban ayaa horseeday dhoofinta waraaqda ceyriinka ah iyo waraaqaha waraaqaha musqusha, halka dhoofinta maro-gacmeedyada, unugyada wajiga, marada miiska, iyo gogosha waraaqaha ah ay muujisay isbeddel. hoos u dhaca mug ahaan iyo qiimahoodaba.
Mareykanku waa mid kamid ah dhoofiyayaasha waaweyn ee wax soo saarka waraaqaha Shiinaha. Tan iyo dagaalkii ganacsiga Shiinaha iyo Mareykanka, mugga waraaqaha guryaha laga dhoofiyo Shiinaha ee Mareykanka ayaa si weyn hoos ugu dhacay. Wadarta guud ee xaashida guryaha loo dhoofiyo Mareykanka sanadka 2020 waxay qiyaastii tahay 132,400 tan, taas oo ka badan intaas. Sanadka 2019, koror yar oo 10959.944t. Warqadda Cadka ah ee loo dhoofiyo Mareykanka sanadka 2020 waxay ka dhigan tahay 15.20% wadarta dhoofinta unugyada Shiinaha (15.59% wadarta dhoofinta ee 2019 iyo 21% wadarta dhoofinta ee 2018), oo ku jirta kaalinta saddexaad ee mugga dhoofinta.
Sannadkii 2020, wadarta mugga soo dejinta ee alaabada fayadhowrka ee nuugta waxay ahayd 136,400 tan, hoos u dhac sanad-sannadeed ah 27.71%. Tan iyo 2018, way sii waday inay hoos u dhacdo. Sannadihii 2018 iyo 2019, wadarta guud ee soo dejinta waxay ahayd 16.71% iyo 11.10% siday u kala horreeyaan. Badeecadaha la soo dhoofiyo ayaa wali ku badan xafaayadaha dhallaanka, taas oo ka dhigan 85.38% wadarta mugga soo dejinta. Intaas waxaa sii dheer, mugga soo dejinta ee gogosha nadaafadda / fayadhowrka fayodhowrka iyo badeecadaha tampon ayaa hoos u dhacay markii ugu horreysay seddexdii sano ee la soo dhaafay, hoos ayuu u dhacay sanadkii 1.77%. Baaxadda soo dejintu way yar tahay, laakiin labadaba soo dejinta iyo qiimaha soo dejinta labaduba way kordheen.
Qiyaasta soo dejinta ee alaabada fayodhowrka ee nuugaya ayaa sii yaraatay, taas oo muujineysa in xafaayada dhallaanka ee dalka Shiinaha laga soo saaro ay soo saaraan, alaabada nadaafadda dumarka iyo warshadaha kale ee wax soo saarka fayadhowrka ay si dhakhso leh u horumaraan, kuwaas oo inta badan dabooli kara baahida macaamiisha gudaha. Intaa waxaa dheer, soo dejinta alaabada fayodhowrka ee nuugaya guud ahaan waxay muujinayaan isbeddel hoos u dhac ku yimid mugga iyo kor u kaca qiimaha.
In kasta oo wershadaha ay saameeyeen aafada, haddana xaddiga dhoofinta ee alaabada nadaafadda ee nuugista ah ayaa sii wadi doona inay koraan sannadka 2020, taasoo kordheysa 7.74% sanadkii illaa iyo 947,900 tan, celceliska qiimaha badeecadaha ayaa sidoo kale wax yar kor u kacay. Dhoofinta guud ee alaabada fayodhowrka ee nuugaya ayaa wali muujineysa isbeddel kobcitaan xoogaa wanaagsan.
Alaabada ceshad la'aanta dadka waaweyn (oo ay ku jiraan suufka xayawaanka) ayaa lagu tiriyaa 53.31% wadarta mugga dhoofinta. Waxaa ku xiga alaabada xafaayada dhallaanka, oo u dhiganta 35.19% wadarta mugga dhoofinta, meelaha ugu badan ee la dhoofiyo ee loogu talagalay alaabada xafaayadaha dhallaanka waa Filibiin, Australia, Vietnam iyo suuqyo kale.
Waxaa saameeyay faafa, baahida macaamiisha ee alaabta nadiifinta shaqsiyadeed ayaa sare u kacday, iyo soo dejinta iyo dhoofinta alaabada tirtiraysa qoyan waxay muujiyeen isbeddel ku yimid mugga iyo qiimaha.
Sannadkii 2020, mugga soo dejinta ee tirtiraha qoyan ayaa is beddelay hoos u dhac ku yimid 2018 iyo 2019 illaa koror 10.93%. Isbeddelada ku yimid mugga soo dejinta ee tirtiraha qoyan ee 2018 iyo 2019 waxay ahaayeen -27.52% iyo -4.91%, siday u kala horreeyaan. Wadarta mugga soo dejinta ee tirtiraha qoyan ee 2020 waa 8811.231t, koror 868.3t ah marka la barbar dhigo 2019.
Sannadkii 2020, heerka dhoofinta ee alaabada tirtire qoyan ayaa kordhay 131.42%, iyo qiimaha dhoofinta oo kordhay 145.56%, oo labaduba labanlaabmay. Waa la arki karaa sababo la xiriira faafida cudurka faafa ee sambabka cusub ee suuqyada dibada, waxaa jira baahi sare oo loo qabo alaabada masaxda qoyan. Badeecooyinka qoyan ayaa inta badan loo dhoofiyaa suuqa Mareykanka, waxayna gaarayaan ilaa 267,300 tan, oo u dhiganta 46.62% wadarta guud ee dhoofinta. Marka la barbardhigo wadarta guud ee tirtirka qoyan ee loo dhoofiyay suuqa Mareykanka sanadkii 2019, wadarta wadarta alaabada masaxaadda qoyan waxay gaareen 70,600 tan, koror ah 378.69% sanadka 2020.